eParewa || Peace and Prosperity » टिकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला, मान्य नहुने राजपाको चेतावनी
टिकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला, मान्य नहुने राजपाको चेतावनी
२०७५ फाल्गुण २२ गते बुधबार ०१:०१
कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । आज जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । ७ भदौ २०७२ मा टिकापुरमा भएको थारुवान...
कैलालीको टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । आज जिल्ला अदालत कैलालीका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
७ भदौ २०७२ मा टिकापुरमा भएको थारुवान र अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलनका क्रममा एक नाबालक र ८ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । मुद्दाका ५८ प्रतिवादीमध्ये २७ जना थुनामा छन् । बाँकी ३१ जना फरार छन् । फरार रहेकै अवस्थामा गत आम निर्वाचनमा कैलाली १ बाट चुनाव जितेका रेशम चौधरीलाई १९ पुसमा सांसदको सपथ गराइएको थियाे । चौधरी अहिले पनि डिल्लीबजारस्थित कारागारमै छन् ।
चाैधरीसँगै हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृज मोहन डगौरा, राजेश चौधरी, विरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सिताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई पनि जन्मकैद फैसला भएकाे छ । उनीहरुमध्ये श्रवण चौधरी नावालक रहेकाले उनलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने छ ।
अदालतले अन्य १२ जना प्रतिवादीलाई तीन वर्ष र एकजना छ महिना कैद सुनाएकाे छ । छ महिना कैद फैसला हुनेहरुमा लक्षण थारु, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, जीतबहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किशानलाल चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, सन्तोष थारु चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरी छन् ।
उनीहरुमध्ये चुन्नीराम बाहेकले कैद भुक्तानी गरीसकेकाेले आजै थुनामुक्त हुने छन भने चुन्नीरामकाे ३० फागुनमा छ महिना कैद पुग्नेछ ।
जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला मान्य नहुने राजपाको चेतावनी
रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय तोक्ने जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले जनताको प्रतिनिधिलाई जन्मकैदको सजाय दिने फैसला दिने जिल्ला अदालत, कैलालीको फैसला मान्य नहुने चेतावनी दिनु भएको हो ।
पार्टीका सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय दिने अदालतको फैसला ‘अन्यायमाथिको पनि अन्याय’ भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले त्यसविरुद्ध देशमा राष्ट्रिय विद्रोह सुरु गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो । ‘जनताको प्रतिनिधिमाथि यसरी जन्मकैदको फैसला गर्न मिल्छ ? यो सरासर अन्याय, अत्याचार र अन्यायमाथिको पनि अन्याय भएकाले थारु, जनजाति, मधेशी मिलेर देशमा राष्ट्रिय विद्रोह सुरु हुने’ नेता महतोको दाबी छ ।
नेता महतोले पार्टीका सांसद चौधरी आन्दोलनकारी भएको र उनीमाथि जन्मकैदको फैसला गर्नै अदालतले पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई किन जन्मकैदको सजाय नदिएको ? भनि आक्रोश पनि व्यक्त गर्नु भयो ।
टिकापुर हत्याकाण्डमा के भएको थियो?
कैलालीमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षकको मृत्यु भएपछि नेपाल प्रहरी स्तब्ध भएको थियो । उनी घटना भएको केही दिनअघि मात्रै सेती अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न कैलाली आइपुगेका थिए, एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने । प्रहरीभित्र निकै मिजासिलो मानिएका न्यौपाने नेकपा एमालेका नेता मुकुन्द न्यौपानेका काकाका छोरा हुन् ।
थरुहट संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयमा थरुहट स्वायक्त प्रदेश लेख्ने योजना बनाएको थियो । सोही अनुसार थारु समुदायका झण्डै ८ हजारभन्दा बढीको संख्यामा आन्दोलनकारी टीकापुरतर्फ अघि बढ्दा प्रहरीले रोक्यो । सुरक्षाकर्मीलाई धकेल्दै अघि बढेका आन्दोलनकारी पशु हाटमा पुगेपछि केहीबेर झड्प भयो । प्रहरीले अश्रुग्यास हानेपछि आन्दोलनकारी झनै उत्तेजित बनेका थिए ।
फिल्डमै खटिएका एसएसपी न्यौपाने आन्दोलनकारीलाई सम्झाउन अघि बढे । तर, आन्दोलनकारीहरुले कब्जामा लिँदै उनीमाथि एक्कासी भाला र गोली प्रहार भयो । त्यसपछि घाइते बनेका उनलाई आन्दोलनकारीले शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएको कैलाली प्रहरीले बताएको थियो । प्रदर्शनकारीले सँगै रहेका एसएसपी न्यौपानेका अंगरक्षक माथि भाला प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २०७५ फाल्गुण २२ गते बुधबार ०१:०१